Sheekh Shariif oo madaxda Turkiga kulamo kula qaatey Istanbul (Sawiro +Video) – SBC
Sheekh Shariif oo madaxda Turkiga kulamo kula qaatey Istanbul (Sawiro +Video)
Madaxweynaha dawlada KMG Soomaaliya oo haatan booqasho ku jooga wadanka Turkiga halkaasi oo uu kaga qayb galayo kulanka madaxda wadamada Islaamka ayaa magaalada Istanbul wuxuu kulamo kula qaatey madaxda wadanka Turkiga.
Madaxweynaha ayaa la kulmay madaxweynaha Turkiga Cabdalla Guul & Ra’isalwasaare Rajeb Dayib Ordagon oo isagu la filayo in isaga iyo qoyskiisa ay magaalada Muqdisho booqasho ku tagaan todobaadkan.
Kulamada uu sida gooni goonida ah Sheekh Shariif la qaatey madaxweynaha & Ra’isalwasaaraha Turkiga ayaa ku aadanaa xiriirka labada wadan ee Soomaaliya & Turkiga, arimaha abaaraha, xaaladaha amaan iyo siyaaso ee gobolka gaar ahaan Soomaaliya.
War ka soo baxay madatooyada Turkiga ayaa lagu sheegay in Madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu uga mahadceliyey Madaxweynaha & Ra’isalwasaaraha Turkiga sida ay dawladoodu ugarab taagan tahay shacbiga iyo dowladda Soomaaliyeed .
Madaxweyne Cabdalla Guul ayaa sheegay in dawladiisu ay diyaar u tahay sii balaarinta kaalmada & taageerada shacabka Soomaaliyeed ee ay dhibaateeyeen dagaalada & abaaraha.
Sidoo kale Madaxweyne Sheekh Shariir kulanka gaarka ah ee uu la qaatey Ra’isalwasaare Ordogan waxay isla soo qaadeen socdaalka u qorsheysan ee uu ku imaanayo magaalada Muqdisho iyo arimaha abaaraha ka taagan Soomaaliya, iyadoo dawladu Turkigu ay kaalmo kala duwan soo gaarsiiyey shacabka ay dhibaateeyeen abaaruhu.
Dhinaca kale waxaa furmaya magaalada Istanbuul ee dalka Turkiga shirkii madaxda dalalka ku bahoobay ururka Shirweynaha Islaamka kaasi oo ay kaga hadlayaan xaaladda Bani’aadannimo ee Soomaaliya gaar ahaan sidii dalalka Islaamku taageerro mideysan ugu fidin lahaayeen Soomaaliya.
Website-ka gaarka ah ee madaxtooyada Turkiga ayaa la soo dhigay Video muuqaal ah oo ku aadan sida diiran ee loogu soo dhaweeyey magaalada Istanbul wafdiga Sheekh Shariif, iyadoo madaxweynaha Turkiga Cabdalla Guul uu soo dhaweynayo, si aad u daawato Video riix linka hoose.